Anozvivakira mabhokisi ekuzvidzivirira mumunda; Mapeji evaravara ehurukuro
Anozvivakira mabhokisi ekuzvidzivirira mumunda
Nzvimbo yekutengesa nesting box: iyo inoshanda sei!
Ko ibhokisi rekuzvidzivirira rakagadzirirwa riri kupi?
Kazhinji uye kazhinji unovaona muminda kana masango: mabhokisi nesting ye shiri dzedu. Chii chinodzingwa nevakawanda sechinhu chisingadikanwi kana sechinhu chinokuvadza, asi chinoponesa dzimwe shiri muhupenyu hwechando.
Kuzvidzivirira kwakadzika mabhokisi ekuchengetedza sehutiziro hwemazuva echando echando
Self-built mabhokisi nesting hazvisi bedzi bedzi, asiwo kunoshumira munguva yechando sehova kubva kunotonhora. The Nature Conservation Union Germany inotarisa nekushaiwa kwekudyara mhuka dzeshiri, nokuti miti yekare uye yakaora inoshayikwa mumasango edu, kunyange mapako emagetsi haashoma.
Kuvaka nesting bhokisi iwe pachako
Saka, zvakakosha kupa shiri idzi nemaitiro ekuberekorora maitiro nenzira self-built mabhokisi nesting chipo.
Kuvaka nest boxes nevana iwe pachako
Zvechokwadi iwe unogonawo kungoita chete bhokisi nesting Buy. Asi inoita zvinonzwisisika uye yakanaka, the Nesting box yekuvaka nevana pachavo, Kutanga, zviito zvakabatanidzwa izvi ndezvenguva inokosha yakashandiswa pamwechete, yechipiri, vana vanodzidza zvakawanda pamusoro pemafambiro eeshiri uye zvavanoda.
Ndichocho bhokisi nesting Imwe ikasimudzwa uye inonakidzwa nekushanya kwakabatikana, vana vane pfungwa huru yekubudirira na self-built nesting box. Munguva yechando, neine ruzivo, vanogona kuona matumisi, wrens, uye dzimwe dzakawanda shiri - uye kunyange squirrels - kutarisa bhokisi nesting kushandiswa senzvimbo yekurara.
Mune dzimwe nguva inotonhora inotonhora inochengetedza self-built nesting box kunyange dzimwe shiri hupenyu. Nokuti kunyanya mumwaka wechando, apo mhuka dzisina kuwana zvokudya zvishomanana, zvinopisa mafuta mazhinji mumuviri. Usiku hunotonhora huri kutongerwa rufu.
Der self-built nesting box inonyanya kugadzirwa necheruvhuro, fir kana beech huni, iyo inofanira kuva yakareba masendimita maviri. Panzvimbo pekuchengetedza matanda (kurwisa fungal infestation, nezvimwewo) unofanirwa kushandisa mafuta epainseed kana kuti yepakati yemagariro, zvisinei iwe unopisa mhuka.
Uyewo chekuchengetedzwa kwezvinhu zvakasikwa kunokurudzira kushandisa zvigadzirwa panzvimbo pezvipikiri, nokuti ipapo bhokisi rinogona kucheneswa gare gare zviri nani. Zvinonyanya kukosha ndezviputi zveputika muzasi kwe self-built nesting box.
Zvichienderana nemhando yemhiri iyo inofanira kubereka mubhokisi, munhu anofanira kusarudza ukuru hwemukova wokupinda. Pamamita makumi matatu emakiromita, somuenzaniso, nuthatches, tsvimbo huru, uye shiri duku inogona kupfuurira, asi pamasendimita makumi maviri nemashanu, zvingori zvakasiyana-siyana zvezvinyorwa zvinogona kuzviita.
Uyewo ukuru hwemukati inosarudza nezve shiri, ivo self-built nesting box rondedzera. Zvakanakisisa kutarisa nevana vako kare kuti shiri dzipi dziri munharaunda yavo dzinovimba nemabhokisi ezvivha uye echinja ukuru zvakakodzera. Nheyo yebhokisi inofanira kuva yakapfuura gumi nembiri kusvika gumi nemaviri masendimita. Zvichiitika, bhuku rakagadzirwa rakakodzera uye rinojekesa rinogona kutorwa nyore nyore kubva paIndaneti.
Heano mamwe mazano ekurembera self-built nesting box, Iko inopinza inofanira kureva kumabvazuva uye bhokisi rinofanira kutora mamita maviri kubva kumusoro. Pamiti unogona self-yakavaka nesting mabhokisi gadzirisa nematareji kana zvishongo zvisina mbambo.
Mukuwedzera, unofanira kuve nechokwadi kuti hapana mvura inogona kupinda mukati kana kunaya: Neizvi, regai bhokisi racho rive rinopfuura mberi, kunyange iwe iwe Einflugloch isati yakanaka seyakanaka. Iva nechokwadi chokuti bhokisi harigoni kucheneswa nemartart kana makate!
Nzvimbo dzakakodzera pedyo nemiti dzinoshandiswa, dzinosvika, dzimba dzemadziro uye mabhakoni. Bhokisi racho rinocheneswa mushure mekuberekwa kwenguva. Ingobvisa dendere rekare ne self-built nesting box kukwesha panze. Iva nechokwadi chekufuka magasi uye usatora bhokisi newe iwe muimba, pane ngozi yekutapurirwa pano!
Nguva yakanakisisa, imwe self-built nesting box kunyangarika ndiko kuwira. Ipapo iwe unogona kunyoresa uye kupona!
Gadzira sandbox yevana mubindu
Nyaya pfupi yevana - kutambira mumunda
Composting | mubindu
Mazano Okurima Munda - Ndiyo nzira iyo munda unowedzera uye unowedzera
Mazano Okurima - Kurisa munda
Bindu Mazano - Bindu rakanaka
Bindu Mazano Aromatic plants - zvinonhuwira mubindu